प्रकाश सपुतले लेखे कमला घिमिरेलाई मन छुने पत्र तिम्रो आगमनले अर्को ५ दशक दोहोरी मर्दैन (भिडियो हेर्नुहोस ) – Khabar Silo
प्रकाश सपुत । हो ! दोहोरी, दोहोरी जस्तो हुनुपर्छ सबैले मन पराउछन । जेनेरेशन को के कुरा ? भेग को कुरा ? नपत्याय हेर्नुस त ? ईन्द्रेणिको यो अंक ट्रेन्डिङ र भ्यु मात्र होईन लाईक कमेन्ट र सेयर । वा । कमला घिमिरेलाई हार्दिक स्वागत र धन्यबाद । तिम्रो आगमनले अर्को ५ दशक दोहोरी मर्दैन । तिमीले मात्रै गायौ भनेपनि पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुनेछ । तिमीलाई तिम्रा उमेरका पुस्ताले पछ्याउनेछन । सुन्नेछन , सिक्नेछन । तिमी पछि फेरी तिमी भन्दा सानी कमला आउनेछिन । र यो अमुल्य दोहोरी संस्कृति रहिरहनेछ अजम्बरी । हामी बेकार सतहि बहस गर्छौ मात्रै ।
पहिला गाउ गाउको मन जितेर एउटा गित रेकर्ड गर्न महिनौ हिडेर मिडियामा आएका सम्मानित अग्रजहरु हुन वा सिधै मिडियामा आएर गाउ गाउको मन जितेकी कमला हरु । अलौकिक समयले सिर्जना र कलाकारहरु जन्माईरहेको हुन्छ। हामीले ग्रहण गर्नु पर्छ । स्विकार्नुपर्छ । हावा, पानी, घाम , जुन स्विकारे जस्तै । घाम को ताप खिचेर घामबाट बिजुले निकाले जस्तै कहिले काहि दोहोरी मा समय सुहाउदो प्रयोग गर्दा र परिमार्जन गर्दा कसैले टाउको दुखाउनै पर्दैन । सोलारले घाम सक्छ र ?
अ साच्चि कमला नानी ।! हुनत ठुली हुदै जादा अझै निखारिदै जाउली, मैले दोहोरी खेल्दा अग्रज रमेश बिजि दाईहरुले भनेको कुरा तिम्लाई भन्छु काम लाग्न सक्छ प्रत्यक टुक्काको ठाडो जवाफ दिदा प्रसंग त्यहि सकिन्छ । दोहोरी खेल्नु भनेको जवाफ दिनु मात्रै होईन, सवाल गर्नु पनि हो । अलिकति अरुलाई अगाडि जान दिनु पनि हो, फेरी अर्को टुक्कामा आफुले उछन्नु हो । अब दोहोरी खेल्दा बाटो छोडेर पनि खेल्नु है ।
तिम्रो आत्मविश्वासको फ्यान भए मत । धेरै धेरै शुभकामना ।अनि राजु परियार दाई ? । तपाई त सधै किङ नै हो । यो दोहोरीमा तपाईको धैर्यता र शब्दहरु उफ़ । नानीको उमेर र अनुभव सुहाउदो कति स्वस्थ र सरल दोहोरी गाउन सक्नु भएको । तपाई सधै आदरणिय हुनुहुन्छ । धेरै पछि पुरै दोहोरी हेरेको, पुरै फिलिङस मा । मज़ा आयो । भिडियो हेर्नुहोस
भ्वाइसबाट आउट भएपछी सुजिता र सन्जु एकसाथ, सुजिताको गीतमा सन्जुको नृत्य, हेर्नुस् भिडियो ..।
Dभ्वाईस अफ नेपाल सिजन ३ बाट आउट भएपछी चर्चामा आएको एउटा नाम हो सन्जु मोक्तान । ब्याटल राउन्डबाट आउट भएकी उनी केही समय निकै चर्चामा आईन । यस्तै नकआउट राउन्डबाट आउट भएकी अर्की प्रतिस्पर्धी हुन् सुजिता योन्जन । सन्जुले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘नसुनेझै गरि मेरो कुराहरु आज फेरी’ बोलको गीत गायर चार वटै कुर्सी घुमाएर रकिङ […]
साप्ताहिक राशिफलः यो साता तपाईंको कस्तो रहनेछ ?